जब जल शाहले सम्झिईन् सुटिङ सेट
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण नेपाली कलाकारहरु पनि घरभित्रै थुनिएको तीन महिना नाघेको छ । सँधै बाहिर हुने कलाकारहरु यति लामो समयसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेको यो पहिलो पटक हो । स्थिति सामान्य हुँदा फिल्मको छायांकन र प्रचारका कारण घरमा बस्ने मौका कमै जुर्थ्यो । लकडाउनपछि फिल्म निर्माण र प्रदर्शन रोकिँदा कलाकारहरु सुटिङमा विताए दिन सम्झँदै बसिरहेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण भएर पहिले झैँ निर्धक्क काममा फर्किने दिनको प्रतिक्षामा छन, उनीहरु । तीन महिनादेखि घरमै विताउँदा सुटिङ सेटको झल्झली सम्झना आइरहेका स्टाटस धेरैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । केही महिना सुटिङबाट टाढा हुँदा त कलाकारहरुको यो हाल छ भने वर्षौंदेखि एक्सन–कटबाट टाढा रहेका अभिनेता–अभिनेत्री झन् कति छट्पटिएका होलान् ?
एक समयकी चर्चित अभिनेत्री जल शाहले सुटिङ सेटमा मेकअप गरेर क्यामेराको अगाडि निर्देशकको एक्सन–कटमा भूमिका निभाएको वर्षौं भइसकेको छ । त्यही कारण उनले मंगलवार मनको पीडा फेसबुकमा स्टाटस पोखिन् । उनी फिल्ममा काम गर्न नपाएर कति न्यास्रिएकी छन्, भन्ने यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कुनै फिल्मको एक सिनको तस्विर शेयर गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘ओह, म मेरो काम याद गर्दैछु ।’ डेढ दशकदेखि फिल्म दुनियाँबाट टाढिएर बस्दा पुराना दिन आँखा अघिल्तिर आउनु नौलो होइन । उनले कयैन् यादगार समय फिल्म क्षेत्रमा बिताएकी छन् । एक समय आफ्नो अभिनयबाट दर्शकको मनमा डेरा जमाएकी उनलाई फेरि कहिले पर्दामा हेर्न पाइएला ?
<<< : ‘चारदिन यो वर्षकै धेरै पानी पर्ने’
दैनिक दुई अध्यक्षको बैठक, अझै फुरेन जुक्ति : >>>
बज्यो पिरतीको घण्टी (भिडियाेसहित)
सुशान्तको मृत्युपछि करनले ८ जना बाहेक सबैलाई हटाए
कोरोनाले अमिताभलाई जुराएको अवसर : पहिलो पल्ट घरमै हेरे परिवारसँग फिल्म
वर्षाले मागिन् माफी
दिवेश अमेरिकन आइडलको उपविजेता
दिवेश अमेरिकन आइडलको टप–टेनमा